Home Wararka Gudaha Ted Sams oo ah 78 jir 60-sano ku qaadatay in uu qaato...
Ted Sams oo ah 78 jir 60-sano ku qaadatay in uu qaato Shahaadada Dugsiga Sare!
Ted Sams oo haatan ay da’diisu tahay 78 jir, wuxuu ku nool yahay gobolka California ee dalka Maraykanka. Toddobaadkan wuxuu ka qalin jebiyey dugsigiisii sare, ka dib markii uu muddo 60 sano ah niyadda ku hayey inuu maruun gacanta ku dhigo shahaadada dugsigiisa sare, hase ahaatee aanay duruufuhu u saamaxin.
Isha: AP / VOA Somali
Previous articleMadaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay Odayaasha Dhaqanka Galmudug
Next articleSuxufiyiin katirsan Reuters oo ku Dhaawacmay Severodonetsk halka uu dhintay wadaha Gaari ay la socdeen.
Golaha ammaanka oo ballan-qaad culus u sameeyey DF Soomaaliya
Abiy Axmed oo war hor leh ka soo saaray colaadda Tigray...